Xaaladaha Heshiiska Helitaanka Isticmaalka - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Macluumaadka Asturnaanta|Xaaladaha Heshiiska Helitaanka Isticmaalka
Fadlan akhri Heshiiskan Helitaanka ("Heshiiska") si taxaddar leh ka hor intaadan marin Wasaaradda Waaxda Ganacsiga ee Washington ("Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington", "annaga", ama "annaga") iyada oo loo marayo websaydhka Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington ama isku xirka websaydhka xogta ("Site"). Heshiiskan waxaa galay inta udhaxeysa Waaxda Ganacsiga ee Washington iyo shaqsi kasta ama hay'ad soo gasha ama isticmaasha Bogga ("Isticmaalaha" ama "adiga.") Shuruud u ah marin u helka Bogga, waxaad ogolaatay in laguu xidho shuruudaha heshiiskan iyo Bayaanka Asturnaanta iyo Amniga ee Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington. Markaad isticmaaleyso ama marin u heleyso Bogga, waad aqbashay oo aad oggolaatay inaad ku xirnaato shuruudahan. Haddii aadan rabin inaad ku xidho shuruudahan, ha marin marinka. Goobta waxaa iska leh oo maamusha Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington, waxaana la siiyaa iyada oo aan wax lacag ah laga qaadin. Waxay ka kooban tahay ama laga yaabaa inay kujirto macluumaad, isgaarsiin, fikrado, qoraal, sawir gacmeedyo, xiriiriyeyaal, farshaxan elektaroonig ah, animations, maqal, muuqaal, softiweer, sawiro, muusig, codad, iyo waxyaabo kale iyo xog (wadar ahaan, "Mawduuc") qaabaysan, abaabulan, waxaana lagu soo ururiyey qaabab kala duwan oo guud ahaan ay heli karaan Isticmaalayaasha, oo ay ku jiraan isku xirnaanta xogta guud, keydka macluumaadka, iyo aagagga isdhexgalka ee laga yaabo ama aan wax laga beddeli karin Isticmaalayaasha. Helitaanka iyo la falgalka Bogga Adiga ayaa mas'uul ka ah bixinta dhammaan qalabka, softiweerka, taleefanka, ama qalabka kale ee isgaarsiinta iyo / ama adeegga si loogu xiro internetka loona galo bogga, waxaadna mas'uul ka tahay dhammaan khidmadaha marin u helka internetka, kharashka taleefanka, kharashka shahaadada dhijitaalka ah, ama ujrooyinka kale ama khidmadaha ka dhashay isku xirka internetka iyo marin u helka ama la falgalka Bogga. Annagu dammaanad kama qaadaynno helitaanka Bogga, ama in Bogga ama xiriir kasta uu noqon doono mid aan kala go 'lahayn ama qalad lahayn. Mawduuca ku jira Bogga waxaa ku jiri kara farsamo ama khaladaad kale ama khaladaad xagga qoraalka ah. Duruufo jira awgood Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington mas'uul kama noqon doonto go'aan kasta oo aad qaadato ama aad qaaddo ee la xiriira Mawduuca. Wakhtiga, isbeddelada ayaa la samayn doonaa oo lagu dari doonaa Mawduuca. Waxaan ku sameyn karnaa isbedel Mawduuca waqti kasta. Dhaqanka isticmaalaha Waxaad ogolaatay inaad marin u hesho oo aad u adeegsato Bogga kaliya ujeedooyin sharci ah oo aad u shaqeyso habdhaqan nabadgelyo oo macquul ah (tusaale ahaan, badalidda ereyada sirta ah ee la ilaaliyo, xiridda boosteejooyinka aan lala socon, iwm), sida loogu baahdo. Adiga keliya ayaa mas'uul ka ah ogaanshaha iyo u hoggaansanaanta dhammaan iyo dhammaan sharciyada, qaynuunnada, sharciyada, iyo xeerarka la xiriira:
Isticmaalkaaga Bogga, oo ay ku jiraan goob kasta oo is-dhexgal ah.
Isticmaalka shabakad kasta ama adeegyo kale oo ku xiran Bogga.
Isgaarsiinta waxaa loola jeedaa taas oo aad ku xireyso modemkaaga, kumbuyuutarkaaga, ama qalabka kale goobta.
Markaad gasho bogga waxaad ku raacsan tahay inaadan:
Xaddid ama ka jooji isticmaale kasta adeegsiga iyo ku raaxeysiga astaamaha is-dhexgalka.
Ku dheji ama ku dir wixii sharci darro ah, hanjabaad ah, aflagaado ah, aflagaado ah, sumcad dilid, fisqi, aflagaado, qaawan, aflagaado, ama macluumaad anshax xumo ah nooc kasta ha ahaadee, oo ay ku jirto xadid la'aan baahinta baahinta ama dhiirrigelinta fal dembiyeedka ah, waxay keenaysaa mas'uuliyadda madaniga ah , ama haddii kale ku xad gudubto sharci kasta oo maxalli, gobol, qaran, ama caalami ah.
Ku dheji ama u gudbi wixii macluumaad ah, softiweer, ama waxyaabo kale oo ku xadgudba ama ku xadgudba xuquuqda dadka kale, oo ay ku jiraan maaddada ku jirta duullaan lagu qaado xuquuqda asturnaanta iyo xayeysiinta, ama alaab ama shaqooyin wax soo saar ah oo ay ilaalinayaan xuquuqda daabacaadda, astaan ​​ganacsi, ama xuquuq kale oo lahaansho, adiga oo aan marka hore rukhsad ka helin milkiilaha ama kan xaq u leh.
Ku dheji ama u gudbi wixii macluumaad ah, softiweer, ama waxyaabo kale oo ay ku jiraan fayras ama waxyaabo kale oo waxyeello leh. Boosto, gudbi, ama si uun uga faa'iideyso wixii macluumaad ah, softiweer, ama waxyaabo kale ujeeddooyin ganacsi ama ay ku jiraan xayeysiin.
Beddel, waxyeellee, ama tirtir wixii Mawduuc ama isgaarsiin kale ah oo aan ahayn Mawduucaaga, ama haddii kale farageliso awoodda kuwa kale ee marin u helka barta.
Carqaladee socodka socodka caadiga ah.
Sheegasho xiriir lala yeesho ama aad u hadasho ganacsi, urur, hay'ad, ama urur kale oo aadan awood u lahayn inaad sheegato xiriir noocaas ah.
Ku xad gudub sharci kasta oo ku shaqeeya, siyaasad, ama tilmaamo bixiyahaaga gelitaanka internetka ama adeegga khadka tooska ah.
Kaqeybqaado adeegsiga aan la fasaxin ama siidaynta dhinac kasta oo macluumaad kasta oo loo helo ujeeddo kasta ah.
Sheegashada xuquuqda lahaanshaha ee waaxda Ganacsiga Gobolka Washington ee codsiyada, nambarka, ama qaabdhismeedka qaabdhismeedka xog kasta oo Wasaaradda Ganacsiga ee Washington ah oo laga helo Bogga.